Raisal Wasaare Rooble oo codsi u diray dadka reer Muqdisho balan-qaadna u sameeyay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Raisal Wasaare Rooble oo codsi u diray dadka reer Muqdisho balan-qaadna u sameeyay
Raisal Wasaare Rooble oo codsi u diray dadka reer Muqdisho balan-qaadna u sameeyay
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble goor dhaw hadal ka jeediyay xaflad uu ka qeyb galay oo lagu furayey wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa codsi u diray dadka reer Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in wadooyinka haatan la furay ay ku qiimeyn doonaan kuwa weli xiran, isla markaana ay wada furi doonaan mar aan dheereyn hadii ay guuleysato wada-shaqeynta shacabka iyo dowladda.
Waxa uu xusay in sababta kaliftay in la xiro wadooyinka ay tahay amni darro ka jirta caasimadda, balse inay hadda furaan qaar ka mid ah ay ugu dhiiradeen si tijaabo ah, hadii tijaabadaas ay guuleysatana waxa uu sheegay in la furi doono inta dhiman jidadka Muqdisho.
“Hadda wadooyinka aan furnay waxaan ku tijaabineynaa sida ay dadku noola shaqeyaan qorshuhuna waa hadii ay guuleysato wadashaqeyntu inaan shacabka u furno inta dhiman” ayuu yiri ra’iisul wasaare Rooble.
Xafladaas ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo dhawaan shacabka reer Muqdisho u balan qaaday in la furi doono wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in madaxdu ay isla garteen in wadooyinka la furo intii la awoodo oo amnigu saamaxayo.
Raisal Wasaare Rooble oo codsi u diray dadka reer Muqdisho balan-qaadna u sameeyay was last modified: October 13th, 2020 by Admin